सूर्यग्रहण : के गर्ने, के नगर्ने ! कुन राशिमा कस्तो प्रभाव -
२०७६, १० पुष बिहीबार ०८:५५ December 26, 2019 clickonLeaveaComment on सूर्यग्रहण : के गर्ने, के नगर्ने ! कुन राशिमा कस्तो प्रभाव
बिहीबार बिहान सूर्यग्रहण लाग्दैछ । अंग्रेजी क्यालेण्डर बमोजिम बिहीबार लाग्ने ग्रहण यसवर्षको अन्तिम सूर्य ग्रहण हुनेछ । नेपालबाट अवलोकन गर्दा सूर्यको केही भागमात्रै ढाकिएको हुनाले खण्डग्रास मात्र देखिनेछ । नेपालमा बिहान ८.३० मिनेटमा सुरु हुने सूर्यग्रहण १०.१ मिनेटमा मध्य हुने र ११.३१ मिनेट जाँदा सकिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ ।
ग्रहणको समयमा नेपालबाट करीब १०.०० बजे सूर्यको करीब ४० प्रतिशत भाग ढाकिएको देखिने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए । एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले ग्रहणको समय तीन घण्टा ३० मिनेट रहेको जनाएको छ । तर ज्योतिष परिषद्ले भने दुई घण्टा ४९ मिनेट मात्रै हुने जनाएको छ । राति ९ बजेर ४२ मिनेटदेखि सुतक लाग्ने ज्योतिष परिषद्का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ज्योतिष केशव गौतमले बताए ।
खगोल विज्ञानले ग्रहण लागेको बेला गर्न हुने.नहुने केही नरहेको बताउँछ । तर धार्मिक मान्यतासँगै ज्योतिष विज्ञानले भने सूर्य ग्रहणको बेला गर्न हुने र नहुने कार्यलाई वर्गीकरण गरेको छ । उक्त मान्यता बमोजिम ग्रहण लागेको बेला दानपुण्य गर्ने, भिक्षा दिने, धार्मिक कार्य गरे राम्रो प्रतिफल पाउने हो ।
ज्योतिष गौतमका अनुसार ग्रहण लागेको गंगा स्नान गर्ने, मन्त्र सिद्धि प्राप्त गर्ने, गुरु बनाउने जस्ता कार्यको प्रतिफल राम्रो हुने बताउनुहुन्छ। धार्मिक मान्यता बमोजिम सूर्यलाई भगवानको रुपमा पूजिन्छ । सूर्यमाथि दोष लागेको बेला र भगवान नै पीडामा हुँदा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गर्दा श्रापित हुने र पाप कर्मको रुपमा गणना हुने गौतम भन्छन ।
समाजका अध्यक्ष भट्टराईले भने अन्य दिन जसरी नै सूर्य ग्रहणको बेला पनि सूर्यलाई नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने सुझाउनुहुन्छ । उनि थप प्रष्ट्याउन्छन , “ग्रहण लागेको बेला सूर्यको प्रकाश छेकेर आउने हो, अन्य दिन प्रत्यक्ष रुपमा पृथ्वीमा पर्दा विकीरणबाट हुने असर ग्रहण लागेको बेला छेकेर आउने हुँदा विकीरणको प्रकोप कम हुने हो, बढ्ने होइन ।”
उनले १६ डी आइएन भन्दा कम लेन्स भएको काँचले सूर्यलाई हेर्न नहुने बताउन्छन। त्यसैगरी, छायाँ पारेर वा सूर्य ग्रहण हेर्न प्रमाणित पोलिमरको चश्मा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
ज्योतिष केशव गौतमले सूर्यग्रहण लागेको बेला आठ राशीले सूर्यग्रहण हेर्न वर्जित रहेको बताउन्छन । सूर्यग्रहणको बेला धनु राशीको मूल नक्षत्रमा रहने हुनाले धनु राशी र मूल नक्षत्र भएका ब्यक्तिले सूर्य ग्रहण हेर्न नहुने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । उनले यसपटकको सूर्यग्रहण चार राशीका लागि मात्रै लाभ योग रहेको प्रष्ट्याए।
ज्योतिष शास्त्रले ग्रहणको बेला सूर्य बसेको राशीबाट अन्य राशीहरुको अवस्थितिको आधारमा विभिन्न राशीको योग पत्ता लगाउँछ ।गोरखापत्रबाट
यस्तो छ आज (बिहिबार २०७६ पौष १०) को राशीफल
यसकारण ‘दुर्लभ’ हो आजको सूर्यग्रहण
भिरमा लागेको आगो बस्तिमा सल्किदा छ घर जलेर नष्ट
२०७५, ३ चैत्र आईतवार १०:४३ March 17, 2019 clickon
नक्कली किसानको अन्त्य गर्न जरुरी : कृषिमन्त्री
२०७६, १३ असार शुक्रबार १४:५६ June 28, 2019 clickon
नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद कायम
२०७५, २२ आश्विन सोमबार ०८:३० October 8, 2018 clickon